Ukukhipha izixhumanisi kumakhasi wewebhu bekulokhu kunzima. Kuzodingeka ukopishe izixhumanisi ezifunayo ngamunye ngamunye, futhi kuyinto enesizotha futhi ethintekayo. Noma kunjalo, kunezinhlelo ezithile ezisekelwe kuwebhu ukukhipha zonke izixhumanisi kusuka kumawebhusayithi wakho afisa namabhulogi ngaphandle kokukhishwa - united auto appraisals. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi lezi zinhlelo zingahlanganiswa neziphequluli zakho ze-IE, Firefox, Chrome, ne-Safari.
I-IWebTool Link Extractor yisofthiwe esithandwayo esekelwe kuwebhu nesandiso se-Firefox. Izosiza ukulanda idatha yakho ngqo emshinini wakho. Once efakwe futhi kusebenze, lolu hlelo luzokwenza inqubo yokuklabalaza lula futhi kuphazamise. Ukukhipha idatha kusuka ezitolo zezindaba, ama-portals wokuhamba kanye nezindawo zokushintshaniswa kwamasheya akuzange kube lula. Ngeli software, ungenza imisebenzi eminingi ngaphandle kokukhishwa. Ivumela izicelo ezinhlanu kuphela ngehora futhi ithuluzi liyaziwa ukusebenza kahle. Ezinye zezinketho zayo ezivelele ziyi-Title kanye ne-anchor text inkinobho nokukhethwa kwe-Google Page-Rank.